मनोरञ्जन Archives - NepalTrending
देब बहादुर परियारको नयाँ गीत “आँखा आँखैमा” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
NepalTrending — June 4, 2022 add comment
काठमान्डौं । सांगीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ गीतहरु बजारमा आउने क्रम जारी छ । सोही क्रममा बहुप्रतिभाशाली ब्यक्तित्व देब बहादुर परियार (हिरा) को नयाँ सांगीतिक कोसेली “आँखा आँखैमा”...	Read more »
फिल्ममा डेब्यु गर्दै मोडल गरिमा शर्मा
NepalTrending — May 26, 2022 add comment
काठमाडौं : म्युजिक भिडियोकी चर्चित मोडल गरिमा शर्मा फिल्म अभिनयमा डेब्यु गर्ने भएकी छन् । ‘लण्डन टु पेरिस’बाट उनले फिल्म डेब्यु गर्न लागेकी हुन् । एबी इन्टरनेशनलको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्म अभिनयका...	Read more »
प्रदीप खड्का र कृष्टिनाको ‘प्रेमगीत ३’ असोज ७ बाट रिलिज हुने
NepalTrending — May 22, 2022 add comment
काठमान्डौं । चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’ले आफ्नो प्रदर्शन मिति तय गरेको छ । यसअघि गतबर्षको फागुण १३ गतेलाई यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरिएको थियो । तर, भारतमा पनि नेपालमासँगै रिलिज गर्ने भन्दै...	Read more »
रबी गहतराज र अनु चौधरीको हिन्दी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
NepalTrending — April 9, 2022 add comment
काठमान्डौं । नेपालमा पछिल्लो समयमा लोक गीतहरुले बजार तताईरहेको बेला नेपाल मै हिन्दी गीतको आगमन भएको छ । नेपालमै रेकर्ड भएको हिन्दी गीत “तु नही तोह मेरी” अनामनगर, काठमाडौं स्थित एक्सन स्टुडियोमा...	Read more »
सिडि बिजय अधिकारीको शब्द, संगीतमा “दुरी मजबुरी” सार्वजनिक
NepalTrending — March 25, 2022 add comment
काठमान्डौ । ईनाक्क्षि ईन्टरटेनमेन्ट प्रा।लि। को प्रस्तुतीमा नयाँ सांगीतिक कोसेली “दुरी मजबुरी” बिमोचन कार्यक्रम सहित सार्वजनिक भएको छ । यस कार्यक्रममा ईनाक्क्षि ईन्टरटेनमेन्ट प्रा।लि। प्रबन्ध निर्देशक राम कंडेलको अध्यक्षता रहेको थियो भने...	Read more »
दिलिप रायमाझी देखि केकि अधिकारी सम्मका कलाकारहरु एउटै गीतमा (भिडियो सहित)
NepalTrending — March 24, 2022 add comment
काठमान्डौं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा बिल्कुलै फरक र सन्देशमुलक गीत “मेरो जात हो नेपाली” सार्वजनिक भएको छ । हुन पनि हो हामी सबैको जात नेपाली हो । मानिसको जात पुरुष अनि महिला...	Read more »
काठमाडौंमा हुने भयो हरेक जिल्लाका कलाकारहरुको भिडन्त, फर्म भर्ने अन्तिम मिति चैत्र १४ सम्म !
NepalTrending — March 16, 2022 add comment
काठमाडौं । नेपाली गीत संगीत भनेपछि कस्को मन छुन्न र रु अझ भन्ने हो भने लोक गीत र मौलिक गीतले त सबैको मन छुन्छ । पछिल्लो समय सांगीतिक क्षेत्रमा लोक गीतले धेरै...	Read more »
“सातौं राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड – २०७८” काठमान्डौंमा भब्यताका साथ सम्पन्न !
NepalTrending — March 13, 2022 add comment
काठमान्डौं । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, उपत्यका समन्वय समिती, काठमाडौंको आयोजनामा “सातौं राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड – २०७८” भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । यस अवार्ड कार्यक्रम सोही संस्थाका...	Read more »
फागुन २८ गते (भोली) “सातौं राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड–२०७८” काठमाडौंमा भब्यताका साथ सम्पन्न हुदै !
NepalTrending — March 11, 2022 add comment
काठमाडौं । अग्रजलाई सम्मान, अनुजलाई प्रोत्साहन भन्ने मुल नाराका साथ “सातौं राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड–२०७८” कार्यक्रम यही फागुन २८ गतेका दिन सांस्कृतिक संस्थान, राष्ट्रिय नाचघर जमल, काठमाडौंमा सम्पन्न हुने भएको छ ।...	Read more »
प्रेमिकाले माग्ने बनाएपछि नाजुक अबस्थामा भेटिए प्रकाश बराइली
NepalTrending — February 17, 2022 add comment
काठमाडौ । प्रकाश बराइली (अभिव्यक्ती)को फिल्म ‘कलियुगको प्रेम’ सार्वजनिक भएको छ । अहिलेको युवा प्रेमी प्रेमीकाहरुको कथामा आधारित रहेको छोटो फिल्म सार्वजनिक भएको हो । यस छोटो फिल्म ‘कलियुगको प्रेम’ मा झुटो...	Read more »